Dowladda Col. C/llahi Yusuf oo geedi ka ah Prof. Geeddi
Buluugleey, January 10, 2006
Col. C/llahi Yusuf ayaa isku diyaarinaya khudbad uu ka jeediyo kullanka lagu balansan yahay golaha baarlamaanka ee loo dhan yahay. Fursadaas ayuu doonayaa in Col. C/llahi uu ku soo jeediyo in uu dowlad cusub dib u soo magacaabayo. Sidaasna waxaa kula taliyey wadamada uu kula shiray Cadan.
Prof. Geeddi ayaa wasiirka kowaad waxaa loogu soo xulay si hogaamiye kooxeedyada Muqdisho looga helo dabacsanaan ay u dhego nugladaan madaxtinimada Col. C/llahi Yusuf. Ujeedadaas waa ay ka socon weysey Muqdisho sababo la xiriira hebednimada loo noqday cadowga Itoobiya.
Prof. Geeddi ayaa cid walba ugu muuqda inuusan ka badbaadi karin in xilka laga qaado marka xubnaha baarlamaanka ay yeeshaan kulankooda ugu horeeya oo ay ku mideysan yihiin labadooda garab. Waxaa looga wareeganayo in kulankaas lagu qabto Muqdisho ayaa loo macneeyey inuu yahay mid lagu dhabarjebinayo Geeddi iyo kooxaha Muqdisho oo ay isku heybta yihiin.
Waxaa aad loo saadaalinaya in kullankaas lagu qabon doono Kismaayo, sidaasna lagu damacsan yahay in dowlada Col. C/llahi lagu sameeyo isbedel. Waxaa la qiyaasayaa in xilka wasiirka kowaad loo dhiibi doono Cabdirisaaq Jurille, meesha Geeddi ama Maxamed Dheere lagu damacsan yahay in lagu qanciyo xil cusub oo ah madaxweyne ku xigeenka, taas oo ah jagadii uu ka geeriyooday Xusseen Kulmiye Afrax.
Sidoo kale waxaa beelaha Muqdisho la siinayaa wasiiro fara badan si ay u hilmaamaan jagooyinka sare ee dowladda iyo in Muqdisho laga soo dhaweeyo dowlada cusub. Arrintaas waxey suurto gelineysaa in howlaha dowladu ay ka bilaabanto Muqdisho iyadoo aan wax abaala looga hayn kooxaha hubeysan ee Muqdisho. Shirarka dowlada oo si rasmiya uga bilowda Muqdisho waxey addunyada marqaati uga noqoneysaa in dowladu ay ka shaqeyneyso magaalo madaxda dalka, awooda Xamarna ay ku leedahay qeyb muuqta. Haddii siyaasiyiin cusub oo fara badan ay ka soo baxaan Xamar waxaan shaki lahayn in hogaamiye kooxeedyada Muqdisho ay gabaabsi ku noqoneyso tageerada ballaaran oo ay hadda ka heystaan shacabka ku nool degaanka Muqdisho, qasabna ay ku noqoneyso iney sida Shariifka galaan gorgortan lagu kibir jebinayo.
Prof. Geeddi ayaa dowladiisa wuxuu soo dhisay laba jeer, taas oo hadda ay ku dhamaatay mid shaqeyn weysey, waxaana siyaasadiisa dhaawacay wareysiyo badan oo uu ku muujiyey qaladaad uu ku dhacay oo wadaniyiinta Soomaaliyeed ay u arkeen nimaan qaranimada Soomaaliyeed qiimaheeda garaneyn. Sidoo kale waxaa dhaawacay markii dalkiisa oo ay ka jirto nabadgelyo la’aan uu ogolaaday inuu u noqdo wasiirka kowaad, haddana dadkiisa uusan la wadaagin nabadgelyo darrada ka jirta dalka, kadib markii uu dabada la galay degmada Jowhar oo uu Col. C/llahi ka galay dhufeys.
Col. C/llahi wuxuu ku leeyahay gar inuu ka muujiyo baqo inuu Muqdisho soo dego waayo hogaamiyeyaasha hubeysan ee awooda ku leh Xamar waa uu ka heyb duwan yahay, wuxuuna uga baxay ballanqaadyo fara badan oo uu la gaarey markii ay ku heshiiyeen iney siiyaan codka doorashada madaxweynenimada. Laakiin Geeddi isaga dhibkaas ma uusan heyn mana ahayn inuu ku raaco inuu la dego Col. C/llahi degmada Jowhar ee waxey ahayd inuu dhibaatada nabadgelyo xumadaa inuu la qeybsado dadkiisa uu u qaaday xilka waqti aysan dalka ka jirin nabad iyo dowlad dhexe oo xoogan.